प्रचण्ड–माधव पक्षले किन बोलायो आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्ड–माधव पक्षले किन बोलायो आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक ?
प्रचण्ड–माधव पक्षले किन बोलायो आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक ?
फागुन ७ गते, २०७७ - १२:५०
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
यसअघि सो पक्षले आफ्ना सवै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नागरिकतासहित पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आउन भनेको थियो ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ पार्टी नेकपा विभाजित भएको थियो । विभाजित प्रचण्ड–नेपाल समूह अहिले सडक आन्दोलनमा छ। आजको बैठकमा आन्दोलनको समीक्षासमेत हुने भएको छ।
फागुन ७ गते, २०७७ - १२:५० मा प्रकाशित